Kuzogqoma o-DJ besifazane bodwa KwaMashu | IOL Isolezwe
Kuzogqoma o-DJ besifazane bodwa KwaMashu
Isolezwe / 3 August 2012, 4:48pm /
BAZOSHIYELANA inkundla bodwa oDJ besifazane kwi-Queen Of The Dance Floor okungumcimbi wokujabulela inyanga yabo ozoba seLacoste Lounge, KwaMashu kusihlwa.
Lo mcimbi uhlelwe ngumsakazi weGagasi FM uKini Shandu othi kufanele kucace ukuthi imbokodo ingenisile ekuphendulweni kwamapuleti ngakho mayinikwe ithuba.
“ODJ besifazane bayawushaya umsebenzi ngakho mabanikwe ithuba kwabona mabangaziphothi. Baningi oDJ besifazane abashaya into ecokeme nasebezakhele igama ngoba bakukhiphile emqondweni ukuthi lo umsebenzi uvuna abesilisa kunabo,” kusho uKini oyingxenye ye-Alex and the Crew kwiGagasi FM.
IQueen of The Dance Floor izobe ishaya ngezaqheqhe zoDJ okubalwa kubona uDJ Zinhle, Happygal, Cndo ukukha phezulu.
Abanye abasakazi abazoba khona nguThandolwethu “Sexa” Ngubane, Zanda Mthembu nomculi u-Aylos.
UZanda nguyena ozophatha uhlelo kuthi u-Aylos aqhulule izingoma zakhe.
Akuzogcina ngalaba abangosaziwayo abazonandisa kodwa kukhona nalabo abasafufusa nokho olungakadalulwa uhla lwabo.
“Baningi kakhulu oDJ esinabo nengicabanga ukuthi ngalo mcimbi kuzovuleleka amathuba omsebenzi bakwazi nabo ukuthi bazizwe benokuzethemba ngokudlalela abantu abaningi,” kubeka uKini othe balinganiselwa ku-20 oDJ abasohlwini.
Kulo mcimbi akuzogcinwa ngendathane yobumnandi kuphela kodwa kunezipho ezihlelelwe abazowuhambela.
Uthe nakuba kungowokuqala kulo nyaka lo mcimbi kodwa uhlela ukuwenza minyaka yonke.
Okunye okuzojabulisa abathandi bobumnandi wukuthi lo mcimbi awuzugcina KwaMashu kodwa uzodlulela nasedolobheni eThekwini endaweni engakadalulwa.
Esevala uKini uthe, lo mcimbi bawenze ngamabomu ngale nyanga yabesifazane.
“Inhloso wukutshela yonke imbokodo ukuthi phezu kwemisebenzi eminingi eyenzayo kodwa nayo iyadinga ukujabula ekupheleni kosuku. Iyadinga futhi ukunikwa inhlonipho nothando zikhathi zonke kungaqalwa noma kugcinwe ngo-Agasti kuphela ngoba iyinsika yezwe,” kuphetha uKini.